Overview of Petroleum Imibhobho Imibhobho Ulwakhiwo
Amagqabantshintshi Mechanical iityhubhu / Chemical & nesichumiso Imibhobho
umbhobho carbon steel ASTM A106-engenan- iqondo lobushushu eliphezulu
iityhubhu ferritic kunye austenitic ingxubevange steel ASTM A213-engenan- ngenxa boilers, superheaters kunye sokufudumeza
ASTM A333-gingxi kunye welding umbhobho steel wesiqhelo iqondo lobushushu eliphantsi
ASTM A335-engenan- ferritic ingxubevange steel tube wesiqhelo iqondo lobushushu eliphezulu
Imibhobho EN10216-2-Unalloyed and ingxubevange kuhlinzwa kwiipropati ezithile lobushushu eliphezulu
pipe steel GB9948 -Seamless for petroleum ng
pipe steel GB6479 -Seamless yezixhobo isichumiso ophezulu uxinzelelo
Ushwankathelo Ezinye Imibhobho & kufaneleka Series
kwinqaku 1: yonke loo mhla yindlela amaxabiso kakhulu.
qaphela 2: "-" ithetha akukho sicelo
① "W" kuthetha kubafaneleyo kokuxhuma.
② xa kufanelekile intonga kunye nembasa, C abaninzi kufuneka 0,35
③ ezifakwe yakha i C kakhulu 0.35.and kakhulu Si yi 0,35 kwaye akukho ayimininzanga ukuba ubuncinane
④ xa C ingaphantsi kakhulu isicelo, C ukunciphisa 0,01% kunye MN ziza kwandiswa 0,06%, kude kube kuninzi MN yi 1.35%
⑤ Cu, Ni Cr Mo ezihanjiswayo ngaphantsi kwe 1.00%
⑥ 0.32% .Cr Mo ezihanjiswayo ngaphantsi kwe 0.32%
⑦ uhlalutyo ubushushu kunye nocazululo imveliso yokugqibela iya kuba zombini ofanelekileyo.
ngemibhobho kwisinyithi wamalahle mining- GB / T 17396-2009
umbhobho kwisinyithi wamalahle lam ubukhulu becala kusetyenziswa umbhobho seamless ekwakheni ngenxa
Ipropu engaphandle ngamanzi yamalahle zam.
EBalulweyo istili kunye Ukutyubhisha API Specification 5CT lesithoba EDITION-2012
Api5ct istili oil ubukhulu becala kusetyenziswa igesi yendalo zothutho oyile, igesi, amanzi kunye nezinye ezilulwelo kunye neegesi, It lungohlulwa lube umbhobho kwisinyithi nogwali steel welding. pipe steel welding, ikakhulu ibhekisa umbhobho longitudinal steel welding
Ingenamthungo, nge welding, kwaye eshushu-elimandla kwalenza pipe
Imibhobho kwisinyithi kunye nemibhobho yesinyithi welding injongo jikelele umphunga, amanzi, irhasi kunye nemigca umoya ASTM A53 / A53M-2012 Standard.
ngemibhobho steel Seamlless processing ephezulu-uxinzelelo imichiza Equipments-GB6479-2013
umbhobho kwisinyithi yezixhobo isichumiso uxinzelelo oluphezulu luphawu eliphezulu carbon zokwakha
kwaye umbhobho ingxubevange kwisinyithi steel ezifanelekileyo izixhobo kwemichiza kunye umbhobho.
Olu hlobo umbhobho ophuma GB6479-2013 eqhelekileyo.